uRabada noPhilander bamangaza iSri Lanka
uKagiso Rabada uthole iTest wicket yakhe yesi-50, uVernon Philander wathola eyesi-150 njengoba amaStandard Bank Proteas elawulila edlala neSri Lanka emuva kwezinsuku ezimbili zomdlalo weSunfoil Test ePPC Newlands eKapa ngoLwesibili.
Bobabili bahlukaniselane ama-wickets ayisishaganambili ukuthi bakhiphe izivakashi ngama-runs angu-110, ekuphenduleni, ama-runs angu-392 abekwe iqembu lasekhaya, abawathole ngenxa yekhulu likaQuinton de Kock lesithathu.
Le-wicketkeeper entsha ihlanganise ama-runs angu-101 (124 balls, 11 fours) esize iSouth Africa inezezele ngama-runs angu-95 kuma-wickets amane akade esele, ngaphambi kokuthi baphendule ngo-35/0 kwi-innings yesibili – bengaphambili ngama-runs angu-317 – ukushiya abaseSri Lanka benokuningi abasazokwenza uma bengafuni ukuhlulwa kwi-series.
Iqembu lasekhaya belingaphambili namhlanje, baqale beno-297/6. Ngaphandle kokulahlekelwa i-nightwatchman uKyle Abbott (16) kuRangana Herath (2/57) ngebhola lesishaganambili losuku, bekuhamba ngendlela eyodwa kusukela lapho.
uDe Kock unezezele ngama-runs angu-33 nangu-40 eno-Philander (20) kanye noKeshav Maharaj (32 not out) kuma-partnership ama-wicket esishaganambili nesishagalolunye ngokulandelana. Ngabokugcina, kanye noRabada (8) bonke bekhishwa umfana omusha uLahiru Kumara, oqede eno-6/122.
uRabada uphinde wahlukumeza abashaya phezulu naphakathi nendawo beSri Lanka, wathola u-4/37 – i-wicket yakhe kaDimuth Karunaratne (24) imfikise kuma-wickets angu-50 kumdlalo wakhe weTest wesi-13.
uPhilander yena uthole u-4/27 – i-wicket yakhe yesi-150 kube ekaSuranga Lakmal (0) njengoba abaphosi beSouth Africa bethole umklomelo ngokuziphatha kahle kwabo futhi basizwa ukushaya okubi kweqembu elivakashile, abalahlekelwe ama-wickets abo ayisishagalolunye ngama-runs angu-54, bakhishwa kuma-overs angu-43.
u-Upul Tharanga uqede enama-runs amaningi angu-26 engaphumanga, kwathi uKeshav Maharaj waqeda eno-2/32.
uDean Elgar (19) noStephen Cook (15) bathole ama-runs kalula kuma-overs angu-11 ababhekene nawo ukubeka amaProteas phambili.